पब्जी खेल्दाखेल्दै अचानक जोडले चिच्याएपछि १८ वर्षीय दीपकको गयाे ठाउकाे ठाउ ज्यान – Sandesh Press
September 7, 2021 221
भारतीय मिडियाका अनुसार गेम खेल्दाखेल्दै अचानक चिच्याएर अचेत भएका उनलाई परिवारले अस्पताल लगेका थिए तर अस्पताल पुग्दासम्म उनको मृत्यु भइसकेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिसले यसको जाँच सुरु गरेको छ ।शवको जिल्ला अस्पतालमा पोस्टमाटृम गरिएको छ । परिवारका अनुसार दीपक धेरै नै पबजी गेम खेल्थे र पछिल्लो २ दिन उनी पहिलेभन्दा पनि धेरै मोवाइलमा व्यस्त थिए ।आजभोलि युवाहरुमा पबजी गेमको लत निकै बढेको छ । उनीहरु यो गेमप्रति यतिसम्म आशक्त भएका छन् कि उनीहरुले ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ । १८ वर्षका युवक पबजी गेम खेल्दाखेल्दै यतिसम्म उत्साहित भए कि उनलाई अचानक हृदयाघात भयो र उनको मृत्यु भयो ।
Prevजमेको कानेगुजीलाई निकाल्न चाहानुहुन्छ ? यो विधि अपनाउनुहोस सुन्ने शक्ति बढ्छ दुई गुण !
Next६ जनाको लखेटि लखेटि ह त्या, १ जना बाच्न सफल ( भिडियो हेर्नुहोस् )
काभ्रेमा मतपेटिका तोडफोड